ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အပြုံးလှလှလေးနဲ့ ပုရိသတွေရဲ့နှလုံးသားကဝေဒနာကို ကုသပေးမယ့် ဒေါက်တာမလေးဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ ခေးလေးခင်ဝင့်ဝါ
ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…. ခေးလေးလို့ ပရိတ်သတ်တွေချစ်စနိုးခေါ်ခေါ်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး ခင်ဝင့်ဝါဟာ အားလုံးရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုတစ်ခဲနက်ရရှိထားသူလေးပါနော်။ ထူးထူးခြားခြား ရှတတအသံလေးနဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့မျက်နှာလုံးလုံးလေးက ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ နှလုံးသားကိုသိမ်းပိုက်ပြီး အချစ်တွေပိုခဲ့ရတာပါနော်။
ပီပြင်လှတဲ့ အကယ်ဒမီရှော့ခ်အိုက်တင်တွေနဲ့ ကျရာဇာတ်ရုပ် ဘယ်လို သရုပ်မျိုးကိုမဆို ပီပီပြင်ပြင်နဲ့ ပရိတ်သတ်တွေရင်ထဲကိုစွဲထင်ကျန်ရစ်နေအောင်ကို သရုပ်ဆောင်နိုင်သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။
ဒကြောင့်လည်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကို ဆက်တိုက်ဆိုသလိုရိုက်ကူးနေရပြီးတော့ ပရိတ်သတ်တွေကြားမှာရေပန်းအစားဆုံးမင်းသမီးလေးတစ်လက်ဖြစ်နေရတာပါနော်။
သူမဟာသူမရဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်လေးတွေ အလှပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေပေးလေ့ရှိပြီးတော့ အခုတစ်ခါမှာ ပရိတ်သတ်တွေကို surpriseလုပ်ကာ သူမဆရာဝန်မလေးပုံစံနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို ချစ်ပရိတ်သတ်တွေကို ထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်နော်။
ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အပြုံးလှလှလေးတွေနဲ့တင် ဝေဒနာတွေယူပစ်သလိုပျောက်သွားစေနိုင်တာမို့ ပုရိသတွေရဲ့ အသည်းစွဲ ချစ်စရာ ဒေါက်တာမလေးဖြစ်လို့နေပါတယ်နော်။
ကဲ… အဖြူရောင်ကုတ်လေးနဲ့. အရမ်းကိုလှနေတဲ့ ဒေါက်တာမလေးခင်ဝင့်ဝါရဲ့ အကြွေတစ်လိုင်း ပုံရိပ်လေးတွေကို ချစ်ပရိတ်သတ်တွေအတွက်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ခ်စ္ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ…. ေခးေလးလို႔ ပရိတ္သတ္ေတြခ်စ္စႏိုးေခၚေခၚေနတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသမီးေခ်ာေလး ခင္ဝင့္ဝါဟာ အားလုံးရဲ႕ခ်စ္ခင္အားေပးမႈကိုတစ္ခဲနက္ရရွိထားသူေလးပါေနာ္။
ထူးထူးျခားျခား ရွတတအသံေလးနဲ႔ ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့မ်က္ႏွာလုံးလုံးေလးက ပရိတ္သတ္ေတြရဲ႕ ႏွလုံးသားကိုသိမ္းပိုက္ၿပီး အခ်စ္ေတြပိုခဲ့ရတာပါေနာ္။
ပီျပင္လွတဲ့ အကယ္ဒမီေရွာ့ခ္အိုက္တင္ေတြနဲ႔ က်ရာဇာတ္႐ုပ္ ဘယ္လို သ႐ုပ္မ်ိဳးကိုမဆို ပီပီျပင္ျပင္နဲ႔ ပရိတ္သတ္ေတြရင္ထဲကိုစြဲထင္က်န္ရစ္ေနေအာင္ကို သ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။
ဒေၾကာင့္လည္း ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးေတြကို ဆက္တိုက္ဆိုသလို႐ိုက္ကူးေနရၿပီးေတာ့ ပရိတ္သတ္ေတြၾကားမွာေရပန္းအစားဆုံးမင္းသမီးေလးတစ္လက္ျဖစ္ေနရတာပါေနာ္။
သူမဟာသူမရဲ႕လႈပ္ရွားမႈပုံရိပ္ေလးေတြ အလွပုံရိပ္ေလးေတြကို မွ်ေဝေပးေလ့ရွိၿပီးေတာ့ အခုတစ္ခါမွာ ပရိတ္သတ္ေတြကို surpriseလုပ္ကာ သူမဆရာဝန္မေလးပုံစံနဲ႔႐ိုက္ထားတဲ့ပုံရိပ္ေလးေတြကို ခ်စ္ပရိတ္သတ္ေတြကို ထုတ္ျပခဲ့ပါတယ္ေနာ္။
ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့အၿပဳံးလွလွေလးေတြနဲ႔တင္ ေဝဒနာေတြယူပစ္သလိုေပ်ာက္သြားေစႏိုင္တာမို႔ ပုရိသေတြရဲ႕ အသည္းစြဲ ခ်စ္စရာ ေဒါက္တာမေလးျဖစ္လို႔ေနပါတယ္ေနာ္။
ကဲ… အျဖဴေရာင္ကုတ္ေလးနဲ႔. အရမ္းကိုလွေနတဲ့ ေဒါက္တာမေလးခင္ဝင့္ဝါရဲ႕ အေႂကြတစ္လိုင္း ပုံရိပ္ေလးေတြကို ခ်စ္ပရိတ္သတ္ေတြအတြက္ျပန္လည္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။